YEYINTNGE(ကနဒေါ): Wednesday, August 25
25 August 2010 Yeyintnge's Diary
BY YeYint Nge ... 8/25/20100comment Links to this post
By ဒေါ်ခင်မျိုးသက် အင်္ဂါ, 24 သြဂုတ် 2010
အန်ဒီအက်ဖ် ဦးခင်မောင်ဆွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျောခိုင်းပြန်ပြီ
ကျော်ခ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၂၉ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ခွဲထွက်ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီကို တည်ထောင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးဦးဆောင် ကော်မတီခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေက ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်း ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။
ဦးခင်မောင်ဆွေနှင့် အတူ NDF ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်အောင်အောင်၊ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဦးသာဆိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးဦးဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးစိန်လှဦးတို့ ၄ ဦး အနေဖြင့် ၁၉၉ဝ ခုနှစ်က နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှု ပြစ်ဒဏ်များ ကျခံခဲ့ရသဖြင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ခွင့်မရှိ၍ အသနားခံစာ တင်ရန် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ပထမတကြိမ် အသနားခံစာ တင်ပြီးဖြစ်သော်လည်း နောက်တကြိမ် ထပ်တင်ခိုင်းစေနေခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မပါစေ၍ အာဏာပိုင်များက လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးခင်မောင်ဆွေက ယုံကြည်နေသည်။
“ ပထမတကြိမ်လည်း တင်ပြီးပြီလေ အခုနောက်တခါ ထပ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တင်ရမယ်ဆိုတော့။ တင်လည်း ရလည်း ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့။ တင်လည်း မတင်ဘူး။ ဝင်လည်း မဝင်ဘူးပေါ့ဗျာ ဒါပါပဲ” ဟု ဦးခင်မောင်ဆွေက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
” ကျနော့ကို ကန့်သက်တဲ့ကိစ္စဟာ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စမှာလည်း မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပါတီခွင့်ပြုချက်နဲ့အတူ ခေါင်းဆောင်ကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးရမယ်ဆိုတာ သဘာဝ ကျတယ်လေ။ ပါတီတော့ ခွင့်ပြုပြီး ခေါင်းဆောင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့ ကျနော် မဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။”
ကျန်သုံးဦးကတော့ အသနားခံစာ ထပ်တင်လိုသည် မတင်လိုသည်ကိုမူ ယခုသတင်းရေးသားချိန်တွင် မသိရသေးပေ။
ထင်ရှားသော နိုင်ငံရေးသမားများအနက် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို စစ်အစိုးရ၏ ရုပ်သေးဟု သတ်မှတ်ကာ စစ်အစိုးရက မတရား ကန့်သတ်မှုများ ပြုသည်ဟုဆိုပြီး နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲကို အစောပိုင်းက စွန့်ခွာသွားသူတဦးမှာ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီမှ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဖြစ်သည်။
မြင့်မောင် | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၄၇ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်မှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သဘောတူပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာ၌ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေများနှင့် ညီမညီ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
သူ့ရှေ့နေများဖြစ်သည့် ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဦးကြည်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်တို့နှင့် ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်တွင် ယမန်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီမှ ၄ နာရီအထိ တွေ့ဆုံခွင့် ရစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဤသို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်တယ်လို့ အဖွဲ့ချုပ်လူကြီးတွေ ဆုံးဖြတ်တာကို သူသဘောတူတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလိုသပိတ်မှောက်တာဟာ အခုမှ မဟုတ်ဘူး။ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က ဗဟိုကော်မတီက ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါလို့ အဲဒီလို ပြောတယ်” ဟု ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး “ဒေါ်စု ပြောတာက ဒီရွေးကောက်ပွဲကို NLD က မဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့ လှည့်မကြည့်ဘဲ နေလို့မရဘူး၊ လေ့လာနေရမယ်တဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုလက်ရှိ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေက တရားမျှတမှု မရှိဘူး။ သို့သော်လည်း အဲဒီ ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်သလားဆိုတာ အမြဲတမ်း အကဲခတ်နေဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေနှင့် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေများသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် မည်သို့မှ ဦးတည်ခြင်း မရှိသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြောင်း ယခုလ ၁၉ ရက်က NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး နေအိမ်တွင် ကျင်းပသော ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ၇ ဦးနှင့် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ၈ ဦးတို့ အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ယမန်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှေ့နေများ တွေ့ဆုံရာတွင် နေအိမ်ပြင်ဆင်ရေး၊ သူမအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားမှု အယူခံတင်သွင်းရေးနှင့် ခြံဝင်းထဲရှိ အိမ်အိုတလုံး ဖြိုဖျက်ရေး ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသော်လည်း အသေးစိတ်ကို ထုတ်ဖော်မပြောပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ကြောင်းလည်း ပြောသည်။
အိမ်မကြီးရှိ ပျက်စီးနေသော နေရာများကို အင်္ဂတေဖြင့် ပြန်လည်ဖာထေးထားသဖြင့် ထိုနေရာများကို ဆေးသုတ်ရန်နှင့် မှန်များ လဲလှယ်တပ်ဆင်ရန် ကျန်နေပြီး ခြံဝင်း လုံခြုံရေး ယူထားသည့် အာဏာပိုင်များက ယခုလအတွင်း အပြီးသတ်ရန် ပြောထားပြီး ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ချမှတ်ခဲ့သည့် ပြစ်ဒဏ်ပြင်ဆင်မှု အထူးအယူခံကို ယခုနှစ် မေလ ၁ဝ ရက်တွင် ရန်ကုန် ဗဟိုတရားရုံးချုပ်သို့ တင်သွင်းခဲ့ရာ လက်ခံခဲ့သော်လည်း နှစ်ဖက်ရှေ့နေများ လျှောက်လဲရမည့် ရက်ကို ယခုတိုင် ကြေညာခြင်း မရှိသေးပါ။
လက်ရှိပြစ်ဒဏ်အရ ရွေးကောက်ပွဲပြီး၍ တပတ်ကြာတွင် ပြန်လွတ်မည်ဟု NLD ခေါင်းဆောင်များက မျှော်လင့်ထားသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကို ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော် အသီးသီးအတွက် ကျင်းပသွားမည်ဟု ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့က စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
Canada Must Support Burma Crimes Inquiry - Protest at Embassy in London
(protest photo enclosed at the end of this press release)
Burma Campaign UK is holdingademonstration at the Canadian Embassy calling on the Canadian government to publicly supportaUN Commission of Inquiry into war crimes and crimes against humanity in Burma.
Canada has traditionally taken the lead in supporting accountability and respect for international human rights and humanitarian law. It has also beenastrong supporter of promoting human rights and democracy in Burma. However, five months has passed sinceareport by the UN Special Rapporteur on Burma calling foraUN Inquiry, and Canada has still failed to publicly state that it supports this.
Canadian Friends of Burma and Burma Campaign UK have joined forces to call on the Canadian government to supportaUN Inquiry.
“If we are going to build enough international support for the establishment ofaUN Inquiry, then it is vital to get the support of countries such as Canada, which hasastrong commitment to human rights,” said Zoya Phan, International Coordinator at Burma Campaign UK. “War crimes and crimes against humanity are being committed in Burma. Canada must not remain silent on this issue.”
Burmese community organisations and human rights groups in the UK are supporting the demonstration, including: National League for Democracy – Liberated Area (UK), Kachin National Organisation, Chin Community, Democratic Party foraNew Society, and Christian Solidarity Worldwide.
Photos from Canada Must Support Burma Crimes Inquiry - Protest At Embassy In London